Hokkora ganama kana Mojootti ta'een namoonni lama rasaasaan rukutaman - BBC News Afaan Oromoo
Hokkora ganama kana Mojootti ta'een namoonni lama rasaasaan rukutaman
Madda suuraa, Feesbuukii Margaa Angaasuu
Taatee torban darbe Xinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammad mudateen walqabatee hiriira mormii godinaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti gaggeefamee tureen walitti bu'insaafi miidhaan qaqqabuusaa gabaafnee turre.
Har'as qaamolee hiriira mormiitiif waamicha taasisan akka jiran miidiyaalee hawaasarratti qoodamaa ture. Haala magaalonni Oromiyaa tokko tokko keessatti argaman ilaalchisuun jiraattotaafi qondaaltota motummaa haasofsiifneera.
Hokkora ganama kana Magaala Mojootti umamee tureen namoonni lama rasaasaan rukutaman.
Magaalaa Mojootti ganama kana hiriira 'namoonni hidhaman nuuf haa lakkifaman' jedhuun gaggeefameen walitti bu'iinsa qaama nageenyaa fi namoota hiriira bahan gidduutti eegaleen namoonni miidhamuu kantiibaan magaalattii Adde Masarat Asaffaa BBCtti himaniiru.
Magaalattiitti sanbata xiqqaa darbe hiriirri halkanii adeemsifamuus himan.
"sanbata xiqqaa galgala namoonni kumaatamaan lakkaa'aman bataskaanni gubateera oduu jedhuun halkan guutuu magaala keessa deemuudhaan hokkora uumaa turan, manneen daldalaa Oromoo irraan miidhaa geessisaa turan, qeerroo fi Oromoo maqaa dhahuun arrabsaa bulani" jedhan.
Itti yaadamee magaalichatti jeequmsa kaasuuf kan jedhamedha malee magaalicha keessatti manni amantaa gubates ta'e gubuuf yaalame akka hin jirres himan.
Gareen kuni har'a ganamas sababa 'namoonni keenya hidhaman yaa hiikaman' jedhuun hiriira bahuudhaan jeequmsa kaasaniiru kan jedhan aadde Masarat dhukaasa gama qaama nageenyaa fi garee kana gidduu tureen namoonni lama rasaasan rukutamuu odeefannoon qabas jedhan.Hiriira yeroo darbee irratti namootni itti yaadanii walitti bu'iinsa sabaa kaasuuf yaalaan hanga nama sagalii ta'an to'achuun qoratamaa jiraachuus eeran.Hokkorri magaalattii keessa ganama kana tures qaamni nageenyaa tasgabbeessuudhaan amma haala nagaatti deebi'aa jiraachuus hima.
Gareen hiriira bahe keessaas qaamni dhukaasu waan tureef namoonni rukutaman kunneen eenyuun akka dhahaman adda baasuun rakkisaa ta'uus eera.
Magaalaan Adaamaa ganama kana sochii nagaa keessa jiraachu riippoortarri keenya achitti argamu kan itti aanu gabaaseera.
Akka ittigaafatamtuun Waajjira kominikeeshinii magaalatti Aadde Raawudaa Huseen BBCtti himaniiru.
Hiriirri har'a akka jirutti miidiyaa hawaasummaatiin gareen waamicha gochaa ture jiraachuu fi qaamoleen nageenyaa sochii kuni akka hin milkoofne qophii gahaa gochuu himan.
Ganama Kanas miira sodaa mul'aturraa kan hafe sochiin uummataa fi daldalaa bifa idileetti deebi'aa jiraachuu himan.
Magaala sabbataas sochii idileetti deebi'aa jiraachuu ittigaafatamaan waajjira kominikeeshinii magaalatti Obbo Taayyee Waaqkennee himaniiru.
Dhaabbilee daldalaa cufaa jiranii fi jiraattota waliinis mariin itti fufuu fi fooyya'iinsi gaariin jiraachuu eeran.
Magaalonni Baalee fi Gobbaa
Haaluma walfakkaatunis Magaalonni Roobee fi Gobbaas miira sodaa mul'aturraa jan hafe hiriirri ganama kana akka hin jirre BBC'n jiraattotarraa ofeefateera.